Addiction And Substance Abuse, Teen (စွဲလန်းခြင်းနှင့် လွဲမှားစွာအသုံးပြုခြင်း၊ ဆယ်ကျော်သက် လူငယ်များ) - Hello Sayarwon
Addiction And Substance Abuse, Teen (စွဲလန်းခြင်းနှင့် လွဲမှားစွာအသုံးပြုခြင်း၊ ဆယ်ကျော်သက် လူငယ်များ)
Dr. Zin Wai Yan Lin မှ ရေးသားသည်။ 02/12/2019 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
Addiction And Substance Abuse, Teen (စွဲလန်းခြင်းနှင့် လွဲမှားစွာအသုံးပြုခြင်း၊ ဆယ်ကျော်သက် လူငယ်များ) ကဘာလဲ။
ဘဝတွင် လူများစွာသည် စွဲလန်းခြင်းပုံစံများစွာကို ရင်ဆိုင်နေကြသည်။ စွဲလန်းခြင်းသည် မည်သည့်အရွယ်၊ မည်သည့်လိင်နှင့် မည်သည့်ဘဝအခြေအနေတွင်မဆို ဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော် များသောအားဖြင့် ဆယ်ကျော်သက် လူငယ်ဘဝတွင် စတင်ပါသည်။ အဖြစ်အများဆုံး စွဲလမ်းခြင်းဖြစ်သော ဆေးစွဲခြင်းအပြင် အရက်နှင့် ဆေးရွက် စသော ပစ္စည်းများစွဲခြင်းသည် ဆယ်ကျော် သက်များ ဘဝကို အန္တရာယ် ဖြစ်စေပါသည်။
စွဲလန်းခြင်းဆိုသည်မှာ လူတစ်ယောက်သည် ပစ္စည်း၏ ဆိုးကျိုးများကို သိလျက်နှင့် ထိုပစ္စည်းများကို စွဲလန်းသော အခြေအနေတစ်ခု ဖြစ်သည်။ အရက်သည် ဆယ်ကျော် သက်လူငယ်များ အများဆုံးစွဲလန်းသော ပစ္စည်းဖြစ်သည်။ ထို့နောက်တွင် ဆေးခြောက်၊ ဆေးပြင်းလိပ်တို့ ရှိသည်။ ၎င်းတို့သည် တူညီသော စွဲလန်းမှီခိုလိုစိတ်ကို ဖြစ်စေ သည်။ အသုံးပြုခြင်းကို မရပ်နိုင်အောင်လည်း အားပေး သည်။
လေ့လာခြင်းများအရ အရက်သောက်သော ဆယ်ကျော်သက် အရေအတွက်သည် ပြီးခဲ့သော ဆယ်စုနှစ်တွင် အံသြတုန်လှုပ်ဖွယ် မြင့်တက်လာသည်။ အသက် ၁၃ နှစ်နှင့်အောက် တွင် အရက်စသောက်သော သူများ၏ ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းသည် နောက်ပိုင်းတွင် အရက်စွဲခြင်း ဖြစ်လာသည်။ အရက်သည် စိတ်ကျစေ သောကြောင့် အဓိကအာရုံကြောစနစ် စွမ်းဆောင်ရည်ကို နှေးစေသည်။ အရက်သောက်ခြင်းသည် အသက်ငယ်သူ များကို နည်းများစွာဖြင့် ဒုက္ခပေးပါသည်။ လူတစ်ယောက်၏ သိမြင်နားလည်ခြင်း၊ စိတ်ခံစားမှု၊ လှုပ်ရှားမှု၊ အမြင်၊ အကြားတို့ကို ပြောင်းလဲမှုများ ဖြစ်စေသည်။
ဆယ်ကျော်သက်များစွာသည် လူဝင်ဆန့်စေရန် အရက်သောက်ကြသည်။ အရက် အနည်းငယ်သည် စိတ် ပြေလျော့ပြီး သက်တောင့်သက်သာ ရှိစေသည်။ လူမှု အသိုင်းအဝိုင်းတွင် ရှက်ကြောက်ခြင်းကို ပျောက်စေသည်။ သို့သော်လည်း အရက်ကို အလွန်အကျွံသောက်ပါက အစ ဦးပိုင်း အကျိုးကျေးဇူးများ မရရှိတော့ပါ။ အရက် ပမာဏ များစွာကို အချိန်တိုအတွင်းတွင် သောက်ပါက အရက် အဆိပ်သင့်ခြင်း ဖြစ်နိုင်သည်။ အရက်အဆိပ်သင့်ခြင်း၏ ပထမဆုံး လက္ခဏာမှာ ပြင်းထန်စွာအော့အန်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် အရက် အလွန်သောက်ခြင်းသည် ဦးနှောက်နှင့် အသည်းပျက်စီးခြင်းကို တဖြည်းဖြည်း ဖြစ်စေ ပါသည်။ ဆယ်ကျော်သက်များသည် အရက်အလွန် သောက်ခြင်း၏ ရလဒ်အနေဖြင့် အလွန်တကူ စိတ်ဓါတ် ကျခြင်း ဖြစ်နိုင်သည်။ အလွန်အမင်း အိပ်စက်ခြင်း၊ သတိ လစ်ခြင်း၊ အသက်ရှူခက်ခြင်း၊ သွေးတွင်း သကြားဓါတ် နည်းခြင်း၊ တက်ခြင်း၊ သေဆုံးခြင်းအထိ ဖြစ်နိုင်သည်။
ဆယ်ကျော်သက် အရွယ်သည် မိသားစုဘဝ အတွက် စိန်ခေါ်မှုအသစ်များကို ကြုံတွေ့ရသော အရွယ်ဖြစ်သည်။ မိဘနှင့်အုပ်ထိန်းသူများသည် ကလေးများ၏ ဆယ် ကျော်သက်တစ်လျှောက် ဖွံ့ဖြိုးမှုအပေါ် သူတို့ လွှမ်းမိုးနိုင် စွမ်း ရှိသည်ကို သတိပြုသင့်ပါသည်။ သင့်ကလေးသည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြောင်းလဲမှုများအား ကလေးအားလုံး ကြုံတွေ့ရသည့်နည်းတူ မိဘများကလည်း ဆယ်ကျော်သက်များနှင့် ပြုမှုဆက်ဆံပုံကိုလည်း ပြောင်း လဲရန် လိုပါသည်။ အထူးသဖြင့် အရက်နှင့် ဆေးသုံးစွဲခြင်း အလေ့အကျင့်ကဲ့သို့သော ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်၏ စိန်ခေါ်မှုများအား မိဘများက နားလည်သဘောပေါက်ပါက အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
ဆယ်ကျော်သက်များ စွဲလန်းခြင်းမဖြစ်အောင် ဘယ်လို ကူညီနိုင်သလဲ။
ထို့အပြင် မိဘများသည် ဆေးလိပ်၊ မူးယစ်ဆေးနှင့် အရက် မသုံးရန် ရှင်းလင်းစွာ တွန်းအားပေးရမည်။ မိမိကိုယ်တိုင် အရက်နှင့် မူးယစ်ဆေးပြဿနာများ ရှိခဲ့ သော်လည်း သင်၏ ဆယ်ကျော်သက်များအား ဆေးသုံး ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ တိုက်ရိုက်ပြောကြား သတိပေးရန် မကြောက်ပါနှင့်။ သင်ချမှတ်ထားသော စည်းမျဉ်းများသည် မိဘ မေတ္တာနှင့် သူတို့၏ ကောင်းကျိုးအပေါ်တွင် မူတည် ကြောင်း သင်၏ ဆယ်ကျော်သက်များ သဘောပေါက်ရန် အရေးကြီးပါသည်။ မိဘများသည် ဆယ်ကျော်သက်များ၏ သူငယ်ချင်းများနှင့် လူမှုလှုပ်ရှားမှုများတွင် စိတ်ပါဝင်စားစွာ ပါဝင်ဆင်နွဲရန် လိုအပ်သည်။ ဆယ်ကျော်သက် သားသမီး များနှင့် အချိန်ပေးနေထိုင်၍ ဥပမာကောင်းများ ပေးရန် လိုအပ်သည်။ ဆေးစွဲခြင်း ကဲ့သို့ ပြဿနာများ ဆယ်ကျော်သက် ဘဝတွင် ရှိနေသော်လည်း မိဘ နှင့် မိသားစုဝင်များသည် ဆယ်ကျော်သက်သားသမီး များ၏ အပြုအမှုကို အကောင်းသဘောဆောင်သော လွှမ်းမိုးမှုများ ပေးနိုင်သည်။
ဆယ်ကျော်သက်အများစုသည် ဆေးစွဲခြင်းအကြောင်း သိကြသည်။ သို့သော် မူးယစ်ဆေးအသစ်များ၊ သတင်း အချက်အလက် အသစ်များ များပြားလာသဖြင့် ဘာကို ရှောင်ပြီး ဘာကို သတ်မှတ်ထားသော ပမာဏ အတိုင်း သုံးနိုင်သည်ကို ဆုံးဖြတ်ရန် ခက်ခဲနိုင်သည်။ မိဘများနှင့် ဆရာများသည် ဆယ်ကျော်သက် သားသမီးများ၏ နေ့စဉ် လှုပ်ရှားမှု များကို ဂရုတစိုက်စောင့်ကြည့်ရန် လိုအပ်သည်။ သင်၏ ဆယ်ကျော်သက် သားသမီးများသည် အန္တရာယ် ရှိသော အကျိုးဆက်များကို သိရက်နှင့် မူးယစ်ဆေးများ ဆက်သုံးနေပါက ဆေးစွဲခြင်း ဖြစ်နိုင်သည်။
What is teen substance abuse?.http://www.webmd.com/parenting/guide/teen-alcohol-and-drug-abuse-topic-overview#1. Accessed September 3, 2016.
DrugFacts: High School and Youth Trends. https://www.drugabuse.gov/publications/drugfacts/high-school-youth-trends. Accessed September 3, 2016.
Teen drug abuse: Help your teen avoid drugs. http://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/tween-and-teen-health/in-depth/teen-drug-abuse/art-20045921. Accessed September 3, 2016.
Substance addiction. http://www.stem4.org.uk/addiction/what-is-addiction/substance.html. Accessed September 3, 2016.
ကပ္ပာယ်အိတ် က နီညိုရောင်အဖုလေးတွေက ဘာလေးတွေလဲ။
အမျိုးသားတွေ ကော်လာဂျင် သောက်လို့ရလား .....